Journey of Ganges - renirano masina indrindra any India
Ny Ganges no làlam-panjakan'i India amin'ny lafiny manan-danja indrindra amin'ny kolotsaina, tontolo iainana ary loharano. Ny tantara ao ambadiky ny dia nataon'i Ganges dia lava sy mahaliana toy ny renirano ihany.
Avy any an-tendrombohitra
Miorina any Himalayas ny fantsom-bohitra, mikoriana mamakivaky ny tanànan'ny Rishikesh any Yoga
India dia tany misy loko sy renirano marobe ary ny renirano rehetra dia misy tantara mifandraika amin'ny lafiny ara-panahy miaraka amin'ny angano momba azy. Inona no angano ao ambadiky ny ony matanjaka indrindra any India?
Mitsangana eo am-pototry ny gilasy Himalaya, Ny Ganges dia miseho hatsaran-tarehy ethereal ao amin'ny tanànan'ny Himalaya ao Uttarakhand, fantatra amin'ny anarana tsy dia mahazatra loatra, Bhagirathi, tamin'ny niandohany. ny renirano miainga avy amin'ny glacier Gaumukh, lasa masina avy amin'ny nahaterahany, ary misy tempoly mitoka-monina miorina akaikin'ny niandohany.
Araka ny inoana amin'ny angano hindoa, hampamiratra ny rano mikoriana, Ny fantsom-basy dia voahidy tao amin'ny hidin'i Shiva, alohan'ny hidinan'ny tany, araka ny angatahin'ireo andriamanitra fa ny rano masina dia mila hidina avy any an-danitra hameno ny olombelona.
Amin'ny lafiny hydrôlika, ny riandrano Alaknanda no ho loharano lehibe indrindra amin'ny Ganges na dia araka ny finoana taloha aza dia taorian'ny fivalozana nataon'ny Bhagirath olon-kendry no nidinan'ny rano ony, izay nahatonga an'i Ganga antsoina hoe Bhagirathi koa ho loharanon'izany.
Io dia eo amin'ny fihaonan'ireo renirano roa ihany, Bhagirathi ary Alaknada, fa ilay renirano dia nantsoina hoe Ganges. Taorian'ity fihaonana voalohany ity dia misy renirano kely sy renirano kely maromaro mifanena amin'ilay renirano masina eny an-dàlana miaraka amin'ireo fihaonana maro toy izany no toerana masina indrindra any India.
E-Visa Indiana mamela mpitsidika amin'ny 180 mahery India e-Visa Firenena azo ekena hahazoana an Business Visa, Visa fitsaboana Indiana, Mpizaha mpizaha tany Visa or Vita amin'ny mpitsabo Indiana Visa avy amin'ny fampiononana ao an-trano.
Tsy vitan'ny hoe mila mitsidika ny Masoivoho Indiana fa tsy mila mitaky ny pasipaoro amin'ny alàlan'ny iraka na paositra ihany koa. Ny eVisa India dia aterina amin'ny alàlan'ny mailaka ary voamarika ao amin'ny rafitry ny solosaina. Ireo tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina dia manamarina ny Indian Visa Online amin'ny fotoana ampitanao ny sisin-tany sy hijerena ireo pitsopitsony manohitra ny pasipaoronao. Tokony ho azonao antoka fa manan-kery mandritra ny 6 volana ny pasipaoro tamin'ny fotoana fampiharana Indian Visa.
Lavitra sy malalaka
Ny fantsakan'ny reniranon'i Ganges any India dia iray amin'ny lovia lehibe indrindra sy mahavokatra indrindra ao amin'ny firenena manohana olona an-tapitrisany amin'ny alàlan'ny fahazoana loharanon-karena sy fivelomana. Manomboka amin'ny tampon'ny avaratra ka hatrany amin'ny tendrombohitra atsimon'i India, ao anatin'izany ny havoana Aravalli any andrefana sy ny ala honko any atsinanana, ny Ny fantsakan'ny renirano dia loharano be mpampiasa indrindra eto amin'ny firenena.
Tributaries maromaro kokoa no mihaona ao amin'ilay ony mahery ka mamorona tranokala misy renirano sy renirano mahomby amin'ny fambolena.
Fomba fijery masina
An-tapitrisany no mandro ao Ganges, Kumbh Mela
Ny Hindus dia mandro amin'ny ranon'ny Ganges manerana ny lalamby ary manolotra felam-boninkazo, jiro solitany ho mariky ny fanajana sy fifikirana. Ny rano amin'ny renirano dia heverina ho masina ary ampiasaina amin'ny tanjona fombafomba rehetra miaraka amin'ny fitondrana ilay dia mody any an-trano.
Na rano kely aza avy amin'ny renirano dia inoana fa manadio izay rehetra latsaka aminy, avy amin'ny vatan'olombelona sy ny fanahin'olombelona ka hatramin'ny fampielezana ny fihovan'ny fiadanam-po ao amin'ny trano iray anafenana azy. Ny rano amin'ny fihaonan'ny renirano dia heverina ho masina indrindra any India, izay misy ny toerana masina indrindra ao amin'ny firenena ary an'arivony maro no mitsidika mba hiroboka ao anaty fahanginan'ny fahadiovana.
The Kumbh Mela izay midika ara-bakiteny rano vilany tany, no fivoriana lehibe indrindra nanatri-maso an'i Ganges rehefa nifanena tamin'ny renirano hafa any amin'ny lemaka avaratr'i India.
Bankin'ny renirano masina
Holy Varanasi, tanàna amoron'ny renirano Ganges
Ny sasany amin'ireo toerana masina indrindra any India dia miorina eo amoron'ny Ganges miaraka amin'ny lafiny ara-panahy mifandray mivantana amin'ilay renirano.
Inoana fa ny fofonain'ny olona iray farany teo amoron'ny Varanasi, tanàna iray manamorona ny renirano, dia mitondra famonjena ho an'ny fanahy, izay fantatra ihany koa noho ny matoatoa mandoro ny renirano. Varanasi kosa antsoina hoe Benares, dia tanàna hajaina ao amin'ny soratra masina Hindu, Jain ary Budhdhist.
Ankoatry ny fisaintsainana ara-panahy, hetsika maro hafa ho an'ny fizahan-tany koa no voalamina ao amin'ny tanàna malaza amin'ny lova yoga azy, Rishikesh, toerana iray fantatra ihany koa amin'ny vavahady mankany Himalaya. Rishikesh dia fantatra amin'ny ivon-toeram-pitsaboana ayurveda sy foibe iraisam-pirenena hianarana yoga sy fisaintsainana.
Ireo mpizahatany vahiny tonga any India amin'ny e-Visa dia tsy maintsy tonga amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina voatondro. Varanasi dia seranam-piaramanidina voatondro ho an'ny e-Visa Indiana.
Ala sy ranomasina
Ala honko Sundarbans, mpizaha tany malaza
Iray amin'ireo toerana lova maintso indrindra, ny Ala honko Sundarbans dia noforonina tamin'ny fihaonan'i Ganga, Brahmaputra ary renirano Meghna, namorona ny delta lehibe indrindra eto an-tany. Ny Sunderbans dia manana ny iray amin'ireo bibidia sy tontolo iainana manankarena indrindra, miaraka amin'ireo renirano sy renirano kely miampita ny sisin'ny renirano lehibe.
Rehefa nahatratra ny fiafaran'ny diany tany atsinanan'i India ny Ganges, dia niomana ny hidina ao amin'ny Bay of Bengal izy Delta Ganga-Brahmaputra eny an-dalana. Sunderbans dia tena iray amin'ireo harena tsy voadinika ao India.
Ankoatra izany, ny Bay of Bengal dia tranon'ny tranokala marobe manan-tantara koa ao anatin'izany ny tempoly efa hatramin'ny arivo taona izay mampiseho ny lasa volamena any India. Ny Tempolin'i Sun of Konark natsangana tamin'ny taona 1200 AD dia toerana iray lova manerantany UNESCO. Ny morontsiraky ny Bay of Bengal koa dia misy tranokalan'ny Budhist fahiny.
Rehefa avy lavitra ny dia avy tany an-tendrombohitra, rehefa nihaona tamin'ny ranomasina ny renirano masina dia nankalazaina tamim-pitiavana sy am-bavaka indray ny fihaonany, izay amin'ny fomba tsotra dia fihetsika fanaovana veloma ny renirano masina, rehefa vita nandritra ny kilometatra an'arivony maro. mamono ny hetahetan'ny olona an-tapitrisany maro eny an-dalana.
Mpizaha mpizaha tany Visa